ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု သက်တမ်းတိုးဖို့ ဥရောပနိုင်ငံတွေ စဉ်းစားနေ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု သက်တမ်းတိုးဖို့ ဥရောပနိုင်ငံတွေ စဉ်းစားနေ
Supporters of detained Myanmar journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo march duringarally in Yangon demanding for their release on September 1, 2018. - The two Reuters journalists in Myanmar accused of breakingastate secrets law while investigatingamassacre of Rohingya Muslims face verdict on September 3. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု သက်တမ်းတိုးဖို့ ဥရောပနိုင်ငံတွေ စဉ်းစားနေ
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဆက်လက် သက်တမ်းတိုးဖို့ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေက စဉ်းစားနေတယ်လို့ ပေါ်လတီကို သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်က ဖော်ပြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာအဆင့်မြင့်အရာရှိ ၇ ဦးကို ခရီးသွားလာခွင့်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ထိန်းချုပ်တာတွေ လုပ်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Reuters သတင်းထောက် ၂ ဦးကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို ဆက်လက် သက်တမ်းတိုးဖို့ စဉ်းစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို အသစ်ထပ်လုပ်ဖို့ ဆွေးနွေးနေတာ ရှိတယ်လို့ ဥရောပ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေက အရာရှိ ၃ ဦးက ပေါ်လတီကို စာစောင်ကို အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိတျဆို့အရေးယူမှု သကျတမျးတိုးဖို့ ဥရောပနိုငျငံတှေ စဉျးစားနေ
ရခိုငျပွညျနယျ အရေးနဲ့ပတျသကျပွီး တပျမတျော ခေါငျးဆောငျပိုငျးကို ပိတျဆို့အရေးယူမှု ဆကျလကျ သကျတမျးတိုးဖို့ ဥရောပသမဂ်ဂအဖှဲ့ဝငျ နိုငျငံတှကေ စဉျးစားနတေယျလို့ ပျေါလတီကို သတငျးဝကျဘျဆိုကျက ဖျောပွပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျမှာ ဘင်ျဂါလီ မှတျစလငျအရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ ဥရောပသမဂ်ဂက မွနျမာအဆငျ့မွငျ့အရာရှိ ၇ ဦးကို ခရီးသှားလာခှငျ့နဲ့ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ ထိနျးခြုပျတာတှေ လုပျထားခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။ Reuters သတငျးထောကျ ၂ ဦးကို ထောငျဒဏျခမြှတျတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ပိတျဆို့အရေးယူမှုတှကေို ဆကျလကျ သကျတမျးတိုးဖို့ စဉျးစားနတော ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ပိတျဆို့ အရေးယူမှုတှကေို အသဈထပျလုပျဖို့ ဆှေးနှေးနတော ရှိတယျလို့ ဥရောပ သမဂ်ဂ အဖှဲ့ဝငျ နိုငျငံတှကေ အရာရှိ ၃ ဦးက ပျေါလတီကို စာစောငျကို အတညျပွု ပွောကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleReuters သတင်းထောက်တွေ လွှတ်ပေးဖို့ အင်ဒိုနီးရှား သတင်းထောက်တွေ ဆန္ဒပြ
Next articleဂျပန်မှာ ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၇ ဦး အထိ ရှိလာ